Mpanamboatra sy mpamatsy kitapo mangatsiaka kokoa - Orinasa mangatsiaka mangatsiaka kokoa ao Shina
Kitapo lamba mangatsiaka kokoa amin'ny soroka misy lamba
Ity poketra mangatsiaka ity miaraka amin'ny tahony dia kilasika ary mivarotra mafana be. Ny fitaovana ivelany dia polyester cationic miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be ary tsy hampiseho loto. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Ny fanakonana dia voaisy tombo-kase amin'ny hafanana izay ho tsy misy rano. Azonao atao ny manisy ranomandry ao anatiny miaraka amin'ny zava-pisotro, voankazo hitazomana ny hatsiaka bebe kokoa. Matetika izahay dia mampiasa savony EPE 4-5mm matevina eo anelanelan'ny ivelany sy ny sisiny mankany ...
Kitapo mangatsiaka fiantsenana polyester ho an'ny morontsiraka
Ity kitapo mangatsiaka fiantsenana ity miaraka amin'ny lamaody lohataona na modely amin'ny fahavaratra dia tena mahazatra ary mivarotra mafana tokoa. Ireo endriny ireo dia tena mety amin'ny tora-pasika. Misy paosy telo eo aloha ho an'ny zavatra kely. Ny efitrano lehibe indrindra dia manodidina ny 20L. Ampy hitazonana lamba famaohana, akanjo milomano ary zavatra amoron-dranomasina hafa raha ilaina izany. Miaraka amin'ny fanidiana ny zipper sy ny tadin'ny tady avo roa heny, azonao atao ny miantoka ny zava-dehibe rehetra ilaina eny amoron-dranomasina ary voatahiry soa aman-tsara eny am-pandehanana. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay ...
Ity kitapo mangatsiaka ity miaraka amin'ny lohataona lamaody na modely fahavaratra dia entana tena mahazatra ary fivarotana mafana tokoa. Tokony ho 17LT izany. Ny paosy eo aloha dia natao ho an'ny zavatra madinidinika toa ny lakile, carte sns sns. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE 4-5mm matevina eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisoratana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa matevina ianao ...
Ity ankizy kitapo kely mangatsiaka kokoa ity miaraka amin'ny lohataona lamaody na modely amin'ny fahavaratra dia tena mivarotra. Tokony ho 7.5LT izany. Misy famolavolana hendry izay azo ovaina ho kitosin-tsipika amin'ny alàlan'ny fanovana ny toeran'ny buckle hook. Sady tsara ny soroka ankavia sy ankavanana. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Ny fanakonana dia voaisy tombo-kase ny hafanana izay ...
Matt cationic polyester mitazona kitapo mangatsiaka afovoany
Ity kitapo mangatsiaka vita amin'ny insulated ity miaraka amina fomba fampiasa polyester polyester matt dia mety tsara ho an'ny olon-dehibe. Tokony ho 18LT io. Ny paosy harato ary ny paosy eo alohany miaraka amin'ny zipper dia ho an'ny zavatra madinidinika toy ny lakile, carte sns ho mora esorina. Ny fitaovana ivelany dia mateza tokoa ary tsy hampiseho ny loto. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Ny fanakonana dia voaisy tombo-kase amin'ny hafanana izay ho tsy misy rano. Azonao atao ny mametraka gilasy ao ...
Kitapo mangatsiaka vita amin'ny lamba polyester vita amin'ny lamba tsy madio ho an'ny piknik
Ity kitapo mangatsiaka voaroaka ity ho an'ny fitsangatsanganana miaraka amina lohataona lamaody na modely amin'ny fahavaratra dia mivarotra mafana be. Tokony ho 20LT izany. Ny paosy harato dia ho an'ny zavatra madinidinika toy ny lakile, carte sns ho mora raisina. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Ny fanakonana dia voaisy tombo-kase amin'ny hafanana izay ho tsy misy rano. Azonao atao ny manisy ranomandry ao anatiny miaraka amin'ny drin ...
Kitapo mangatsiaka kokoa vita amin'ny lamba polyester miaraka amina lamaody lamaody
Ny kitapom-batsy mangatsiatsiaka kokoa miaraka amina lasantsy aloha sy lohataona na maody fahavaratra dia amidy mafana tokoa. Tokony ho 20LT izany. Ny elastika dia ny manantona akanjo manify sasany toy ny T-shirt na lamba famaohana. Ny paosy sisiny misy zipper dia ho an'ny zavatra madinidinika toy ny lakile, carte sns ho mora raisina. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Matetika izahay ...
Harona mangatsiatsiaka kokoa ho an'ny fety ataon'ny fianakaviana polyester lamba
Na handeha ho any amin'ny lanonam-pisakafoanana manaraka ianao, potluck, lanonana fanakanana ny manodidina, na hetsika fanaovana rambony, ny harona mangatsiatsiaka kokoa dia fomba tsara indrindra hitaterana ireo lovia tianao indrindra amin'ny fotoana manokana. Manolotra modely lamaody isan-karazany izahay izay azo antoka fa hahafaly ny mpandray vahiny na vahiny. Ny fahaiza-manao lehibe dia hitazona sakafo sy zava-pisotro betsaka. Ataovy mafana ny sakafonao mafana sy ny sakafo mangatsiakao amin'ny fizahana ny safidinay mahafinaritra androany! Ity harona mangatsiatsiaka ity dia miaraka amin'ny endrika lamaody ary ...
Kitapo mangatsiaka kokoa vita amin'ny lamba polyester 10L amin'ny paosin'ny endrika lamaody
Ity kitapo mangatsiaka ity dia manodidina ny 10L. Izy io dia azo fenoina boaty fisakafoanana sy voankazo ary zava-pisotro vitsivitsy. Ny paosy eo aloha dia natao ho an'ny zavatra kely vitsivitsy. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Manitsy ny fehin-tsoroka dia mora entina. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE 4mm matevina eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisakafoanana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa iray matevina kokoa ianao ...
Kitapo mangatsiaka kokoa vita amin'ny lamba polyester amin'ny volavolan-dahatsoratra fahavaratra lohataona
Ity kitapom-batsy mangatsiaka ity dia miaraka amin'ny endrika lamaody. Nikatona ny vava paosy lehibe tsy nisy zipper fa buckle fanafahana. Paosy roa amin'ny lafiny rano / zava-pisotro na zavatra kely vitsivitsy. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE 4-5mm matevina eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisoratana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa matevina o ...
Ny lamba polyester 6 dia afaka mangatsiaka kokoa amin'ny kitapo miaraka amin'ny famolavolana modely lohataona lohataona
Ity kitapo mangatsiaka 6 ity dia entana mahazatra indrindra. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny lamba manarona dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE matevina 3-4mm eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisoratana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa iray matevina kokoa ianao. Isan-taona dia manome modely vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Tongasoa namboarina ihany koa. Tena matanjaka izahay ...